करीनाले अल्ट्रासाउण्डको भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘यो मेरो तेस्रो बच्चा’, सामाजिक सञ्जाल किन ता तियो ? – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > करीनाले अल्ट्रासाउण्डको भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘यो मेरो तेस्रो बच्चा’, सामाजिक सञ्जाल किन ता तियो ?
Poonam July 11, 2021 July 11, 2021 मनोरञ्जन	0
एजेन्सी। दुई सन्तानकी आमा बलिउड अभिनेत्री करीना कपूर खानले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा तस्वीर शेयर गरेपछि सामाजिक सं जाल प्रयोगकर्ताहरू अलमल्लमा परेका छन् । फोटोमा करीनाले अल्ट्रासाउन्डको रिपोर्ट हेरिरहेको देखिन्छ ।
यो फोटो देखाउँदै करीना के भन्न खोजेकी हुन भन्ने मानिसहरूले बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, अब भने करीनाले भिडियो शेयर गर्दै त्यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिएकी हुन् । उनले ग र्भाधानदेखि जन्मसम्मको सबै दुःख, सुःख समेटेर कि ताब प्रकाशन गरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
दुई पटकको गर्भावस्थाका दिन स्मरण गर्दै करीनाले भिडियो साझेदारी गर्दै लामो स्ट्याटस लेखेकी छिन्, ‘यो मेरो यात्रा हो‘दुबै मेरो गर्भावस्थाको अनुभव बाइबिलले लेखेको छ ।
यी दिनहरू राम्रा र खराब दुवै दिनहरू थिए, केही दिन म काममा जान हतारमा भएको समयमाँ म ओछ्यानबाट बाहिर निस्कन संघर्ष गर्दै थिए। यो पुस्तक मेरो दुबै गर्भावस्थाको बखत मैले शा री रिक र भावनात्मक तवरले अ नुभव गरेको कुराले भरिएको एक व्यक्तिगत विवरण हो।
किताबलाई करीनाले आफ्नो तेस्रो बच्चा (सन्तान) जस्तै भएको भन्दै डाक्टरहरुको सहयोगले प्रकाशन गर्न सम्भव भएको समेत उल्लेख गरेकी छिन् ।
वियोन्सीसँग नयाँ गीत गाउने तयारीमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ!
टमाटककाण्डः टमाटर किन्न किड्नी बेचिदिए यी युवाले… हेर्नुस् रमाइलो भिडियो